यी हुन् जन्डिस हुनुको कारण, कसरी बच्ने ? « Mero LifeStyle
मेरो लाइफस्टाइल	|| 20 September, 2021
जन्डिस आफैँमा रोग होइन । तर, रगतको रोग र कलेजोको रोगले गर्दा बिशेष गरि जन्डिस देखा पर्दछ । धेरै अवस्थामा यो कलेजोसम्बन्धि रोगको लक्षण हो । जसरी ज्वरो आफैमा एउटा रोग होइन, त्यस्तै कलेजो सुन्नेको या कलेजोमा असर छ कि भनेर बुझ्नु पर्छ । पित्तथैलीमा पत्थरी हुँदा पनि जन्डिस देखिन सक्छ्र ।
जन्डिसले शरीरमा असामान्य तरिकाले पहेँलोपन ल्याउने भएकाले यसलाई रोगको संज्ञा दिने गरेको पाइन्छ । विशेषगरी, रगतमा विलिरुबिनको मात्रा बढी भएमा आँखा, छाला र मुख पहेँलो हुन्छ । त्यसैलाई जन्डिस भएको मानिन्छ । त्यसैले जन्डिस हुनुको कारणहरु के–के हुन् ? र, यसबाट कसरी बच्ने ? लगायतका विषयमा पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डा. सुवास भट्टराईको सुझाव यस्तो छ :
– हेपाटाइटिस ए, ई
– कलेजो रोग
– हेपाटाइटिस बी,सी
– फिल्टर नगरिएको तथा नउमालेको पानी
– पित्तथैलीमा पत्थरी
– मुख नमीठो हुने
– पानी उमालेर तथा फिल्टर गरेर मात्र पिउने
– मद्यपान नगर्ने
– खाना बनाउनु, खानुअघि साबुन पानीले राम्ररी हात धुने
– जंकफुड नखाने
– नियमित बिहान बेलुका खाने दाल भात तरकारी खाने
– चिल्लो, पिरो, अमिलो तथा माछामासु कम खाने
– हाम्रो समाजमा जन्डिसलाई लिएर विभिन्न भ्रममहरु व्यापत छन् : जस्तो कि बेसार खाएर जन्डिस बढ्छ , नुन खानु हुन्न , जे पनि उमालेको खाने आदि गरिन्छ । जसले गर्दा बिरामी कमजोर भएको हुन्छ । पौष्टिक आहार पुगेन भने बिरामी झन् कमजोर हुन्छ । त्यसैले पौष्टिक खाना दिनुपर्छ ।
– कतिपटक त यो नखाने त्यो नखाने गरेर बिरामीले पौष्टिक तत्व नै पाउँदैन । जन्डिसले भन्दानि खाना नपाएर बिरामी कमजोर, दुब्लो हुन्छन् । धेरै पटक ग्यास्टिक, अल्सर भएर पनि आउने गर्छन् ।
– जन्डिस भएको बेला मुख नमिठो हुने भएकोले खाना रुच्दैन जसले गर्दा बिरामी कमजोर हुन्छ । त्यसैले शरीरमा तागतको कमी हुन नदिन ग्लुकोज पानी, फलफूलको रस प्रसस्त मात्रामा खानुपर्छ । उखु र मेवा जस्ता फलफुलहरु नै खान दिनुपर्छ भन्ने होइन तर सिजनेबल फलफूल भने खानुपर्छ ।
– नियमित बिहान बेलुका खाने दाल भात खान मिल्छ । तरकारी बनाउनको लागि थोरै तेलको प्रयोग गर्न पनि मिल्छ । तर, फ्राई गरेको, तेलमा तारेको, प्याकेट फुड जंकफुडहरु खानु हुँदैन ।
– जन्डिस के कारणले भएको हो भन्ने पत्ता लगाउन जरुरी छ । जन्डिसको लक्षण मात्र भएकाले सम्बन्धित रोगको उपचार गर्दा यो आफैँ निको हुन्छ ।